संबाद - Cooperative News Service
निमर्ला श्रेष्ठ, सचिव, महिला उद्यमी उपभोक्ता सहकारी संस्था आजकाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? अहिले हाम्रो यो महिला उद्यमी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले जसले इ.एम. उत्पादन गर्दै आएको छ । यो इ.एम, हाम्रो अर्गानिक अभियानलाई प्रचारप्रसार गर्ने सँगसँगै सहकारी अभियानमार्फत कसरी महिला दिदिबहिनीलाई उद्यमी बनाउन सकिन्छ…
महिलाको शक्ति बढाउदैँ महिलाशक्ति सहकारी
अशोज २३, २०७५
नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या ३४ हजारभन्दा बढी छ । देशको अर्थतन्त्रमा सहकारीलाई एक महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा लिइएको छ । यसमा महिला सहकारीको उपस्थित पनि उल्लेखनिय छ । महिला सहकारीले के कस्तो काम गर्छ ? यसका काम गर्ने क्षेत्रहरु तथा काभ्रेको बनेपा, तरकारीबजार स्थित महिला शक्ति लगानी…
हालसालै नेपालका २० वटा सहकारी संस्थाहरुले एक्सेस ब्रान्ड प्राप्त गरेका छन् । पाँचवटा रजत र १५ वटा काश्य सहित २० वटा सहकारीले एक्सेस ब्रान्ड पाएका हुन् । एक्सेस ब्रान्डका लागि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले सहजीकरण गर्दै आएको छ । २०…
नेपालको संविधानले सहकारीको अधिकार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राखेको छ । ३८ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको डिभिजन सहकारी संस्थाको अभिलेखहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानिय तहलाई दिएपछि सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयमा रहेको सहकारी कार्यक्रमका बजेट पनि सिधैँ स्थानिय तहमा…
नेपालमा हाल ३४ हजार भन्दा वढी सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन । त्यसमध्ये करीव १४ हजार वचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन । देशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको अवस्था कस्तो छ ? यी संस्थाको गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी…
नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका साथै सामाजिक र आर्थीक रुपान्तरणको लागि सहकारी अभियानको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका अधिकांश विकसित र विकासोन्मुख देशको विकाससँग सहकारी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिदै आएको पाइन्छ । साथै नेपालमा पनि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्वाको रुपमा स्विकार गरिएको…